ठूलो बाढी पस्दा सौराहाका होटल डुबे ! | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > ठूलो बाढी पस्दा सौराहाका होटल डुबे !
ठूलो बाढी पस्दा सौराहाका होटल डुबे !
News August 13, 2017 समसामयिक	0
क्षेत्रीय होटल सङ्घ, सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेका अनुसार शनिबार साँझदेखि राप्ति किनारका पब, रेस्टुरेन्ट र होटलहरु पानीले डुबेका हुन् । कतिपय होटलका पहिलो तलाको पूरै भागसमेत डुबानमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।
विसं २०५९ यताको यो नै सबैभन्दा ठूलो बाढी रहेको घिमिरेले बताउनुभयो । त्यतिबेला सौराहामा बाढी पसेर होटलमा बालुवा भरिएपछि ठूलो क्षति भएको थियो । सौराहा जाने चित्रसारी पुल नजिकै रहेको प्रहरी चौकी डुबानमा परेपछि स्थानान्तरण गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका प्रमुख दीपक थापाले बताउनुभयो । सौराहामा रहेको प्रहरी चौकी पनि डुबानमा परेको छ । राप्ती नदीको बाँध नाघेर सौराहामा बाढी पसेको हो ।
यसैगरी, राप्ती, कयरखोला, लदरी, पम्फाखोलाको बाढी गाउँ पसेपछि पूर्वी चितवनको खैरहनी, पर्सा, भण्डारा र रत्ननगरलगायतका क्षेत्रमा डुबान भएको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो । राप्तीकै पानी पसेपछि पश्चिम चितवनको पटिहानी, जगातपुर र मेघौलीका नदी तटीय क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । नदी छेउमा बसोबास गर्नेलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको थापाले बताउनुभयो ।
नारायणी, राप्ती, रिउलगायतका नदी बढेपछि स्थानीय प्रशासनले सतर्कता अपनाउन सबैमा अपिल गरेको छ । रासस
कम्प्युटर छिटो खुल्ने बनाउन यसो गरौँ
तैरिरहेको अवस्थामा बालकको शव फेला
बुद्ध लामा पहिलो नेपाल आइडल भएपछी,मनोज गजुरेलले दिए यस्तो चोटिलो सन्देश !
अष्ट्रेलियाले पनि १०० का नोट बन्द गर्ने
बालिका बलात्कारको आरोपमा बृद्ध पक्राउ